​कानमा रौं पलायो ?बन्नुहोस सावधान, खतरामा छ तपार्ईको जीन्दगी !
Tuesday, 26 Jun, 2018 12:25 PM
१२ असार २०७५ । कानमा रौं पलायो भने हेर्नमा त यो नराम्रो देखिन्छनै । यो तपाईंको विग्रदोँ स्वास्थ्यको निशानी पनि हुन सक्छ । केही समयअघि गरिएको एक अनुसन्धाने यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । यो अनुसन्धानले कानमा रौं पलाउनुलाई ज्यानमारा रोगको लक्षण पनि हुन सक्ने बताएको छ । के संकेत गर्छ त कानमा रौं पलाउनुले ?
१– २०१६ मा गरिएको एक रिसर्चका अनुसार जुन व्यक्तिको कानमा धेरै रौं पलाउँछ उनीहरु मुटु रोगबाट पीडित हुने संभावना हुन्छ । खास गरेर यस्ता व्यक्तिमा हृदयघात हुने जोखिम उच्च हुन्छ ।
२–कानमा रौं पलाउनु जेनेटिक समस्याभन्दा पनि व्यस्त जीवनशैलीका कारण हुने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । यो समस्या अघिक गरेर धूमपान गर्ने व्यक्तिहरुमा हुने गरेको छ ।
३–कानमा रौं पलाउनु र हृदयघातको बीचमा गहिरो सम्बन्ध पाइएको छ । सन् १९७३ मा डा. स्यान्डर्स टी. फ्रान्क र उनको टिमले गरेको अध्ययनले हृदयघातको समस्या ती व्यक्तिहरुमा देखियो जसको कानमा रौं पलाएको छ ।
४–यदि तपाईंको कानमा पनि रौं पलाउने गरेको छ भने यसलाई साधारण कुरा सम्झेर लापरवाही नगर्नुहोस ।